ကိုယ်ခံပညာသင်ယူရင်းနဲ့ နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလာမလဲ – For her myanmar
Posted on March 9, 2018 August 11, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
တချို့ကလည်း ကိုယ်ဘယ်မှမသွားရင်၊ညအချိန်မတော်အပြင်မထွက်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ ကိုယ်ခံပညာတွေဘာတွေသင်ထားစရာမလိုပါဘူး လို့တွေးကြမှာပါ။ အက်ဒ်မင်အနေနဲ့ယောင်းတို့ကို ပြောချင်တာက ကိုယ်ကမလိုအပ်ဘဲ ဘယ်မှမထွက်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ အန္တရာယ်ဆိုတာမျိုးက အချိန်မရွေးကျရောက်တတ်တဲ့ သဘောမှာရှိပါတယ်။
အခန့်မသင့်ရင် ကိုယ့်အိမ်မှာတောင်ကိုယ် တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးဖြစ်တတ်တော့ ကိုယ်ခံပညာဆိုတာသင်ယူလေ့လာထားတာမမှားပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ခံပညာတတ်ထားသူဟာ ခန္ဓာကိုယ်သေးညှက်သူဖြစ်စေ၊ ထွားကျိုင်းသူဖြစ်စေ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုကြံ့ခိုင်သူတွေက ပိုအားနည်းတတ်သူတွေကို အနိုင်အထက်ပြုလေ့ရှိတာမို့ ကိုယ်ခံပညာတတ်မြောက်ထားရင် ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးသူကိုတောင် ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ပြောချင်တာက ကိုယ်ခံပညာဆိုတာ အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့မှာလည်း တခြားအားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ သူရဲ့အခြားအားသာချက်တွေဟာ ဘာတွေလဲဆိုတော့ …
ကိုယ်ခံပညာသင်တန်းကိုသွားရင် မိတ်သစ်ဆွေသစ်တွေရလာမှာတော့အမှန်ပါပဲ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ အိမ်ထဲမှာ အချိန်ကုန်နေသူတွေ၊ အလုပ်လုပ်ရင်လည်း အလုပ်ကလူတွေနဲ့ပဲ နေ့စဉ်ဆက်ဆံမိနေသူတွေအတွက်တော့ ကိုယ်ခံပညာသင်တန်းသွားလိုက်ရင် အပြောင်းအလဲတစ်ခုတော့ရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် နေရာစုံ၊ အလွှာစုံ၊ လုပ်ငန်းစုံက လူတွေ၊ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ပိုကျယ်ပြန့်လာနိုင်ပါတယ်။ြ
အထူးသဖြင့် ယောင်းတို့အနေနဲ့ အပြင်ထွက်သွားလာရာမှာ ပိုပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ငါ့ကို ဘယ်သူများ အန္တရာယ်ပေးမလဲ၊ ဟိုနားကလူက ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမှာလားလို့တွေးကြောက်နေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဘယ်အချိန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ခံပညာတတ်ထားသူက ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပြုသူကို အချိန်မရွေးလက်တုံ့ပြန်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါကိုယ်ခံပညာ တတ်ထားတာပဲဆိုပြီး သွားချင်တိုင်းသွား၊ လာချင်တိုင်း လာတာမျိုးလို ယုံကြည်မှုမလွန်ကဲသင့်ဘူးပေါ့နော်။
Related Article >>> ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယ် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ငရုတ်ဖြန်းဆေးကို ဒီလို လုပ်မယ်!
တကယ်တော့ ကိုယ်ခံပညာသင်ယူလေ့လာတာဟာ ပင်ပန်းသလို၊ ဇွဲရှိဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။ သင်တန်းကို သွားလိုက်၊ မသွားလိုက်လုပ်တာမျိုးတို့ ပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီး နောက်ရက်မသွားတာမျိုးမလုပ်ဘဲ အဆုံးထိမှန်မှန်ကန်ကန်သင်ယူလေ့လာဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရသွားရင် ကိုယ့်အလုပ်၊ကိုယ့်ဘဝမှာလဲ ဇွဲရှိဖို့၊ ဘာမဆိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်တတ်ဖို့ထိန်းချုပ်တတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ကောင်းလေးရသွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုယျခံပညာသငျယူရငျး အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျရပွီး ကွညျလငျတဲ့အသားအရပေါရရှိနိုငျသတဲ့…
ဒီတဈလောမှာ မိနျးကလေးတှကေိုယျခံပညာသငျထားသငျ့တယျဆိုတဲ့အသံတှကေယျြကယျြလောငျလောငျထှကျပျေါလာနပေါတယျ။ အကွောငျးကလညျး မိနျးကလေးတှဟောလိငျပိုငျးဆိုငျရာအန်တရာယျပွုခံရတာတှမေကွာခဏ ဖွဈပျေါနတောကွောငျ့ပါ။
တခြို့ကလညျး ကိုယျဘယျမှမသှားရငျ၊ညအခြိနျမတျောအပွငျမထှကျရငျပွီးတာပါပဲ။ ကိုယျခံပညာတှဘောတှသေငျထားစရာမလိုပါဘူး လို့တှေးကွမှာပါ။ အကျဒျမငျအနနေဲ့ယောငျးတို့ကို ပွောခငျြတာက ကိုယျကမလိုအပျဘဲ ဘယျမှမထှကျဘူးလို့ဆိုပမေဲ့ အန်တရာယျဆိုတာမြိုးက အခြိနျမရှေးကရြောကျတတျတဲ့ သဘောမှာရှိပါတယျ။
အခနျ့မသငျ့ရငျ ကိုယျ့အိမျမှာတောငျကိုယျ တိုကျခိုကျခံရတာမြိုးဖွဈတတျတော့ ကိုယျခံပညာဆိုတာသငျယူလလေ့ာထားတာမမှားပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျခံပညာတတျထားသူဟာ ခန်ဓာကိုယျသေးညှကျသူဖွဈစေ၊ ထှားကြိုငျးသူဖွဈစေ မိမိကိုယျကို ကာကှယျတတျပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ပိုကွံ့ခိုငျသူတှကေ ပိုအားနညျးတတျသူတှကေို အနိုငျအထကျပွုလရှေိ့တာမို့ ကိုယျခံပညာတတျမွောကျထားရငျ ကိုယျ့ထကျအငျအားကွီးသူကိုတောငျ ပွနျတိုကျခိုကျနိုငျပါတယျ။
နောကျပွီး ပွောခငျြတာက ကိုယျခံပညာဆိုတာ အန်တရာယျကိုကာကှယျနိုငျရုံသကျသကျမဟုတျပါဘူး။သူ့မှာလညျး တခွားအားသာခကျြတှရှေိပါတယျ။ သူရဲ့အခွားအားသာခကျြတှဟော ဘာတှလေဲဆိုတော့ …
Related Article >>> အန်တရာယျကို ကာကှယျနိုငျဖို့ အမြိူးသမီးတိုငျးသိသငျ့တဲ့ ရိုးရှငျးတဲ့ တိုကျကှကျလေးမြား
ကိုယျခံပညာသငျတနျးကိုသှားရငျ မိတျသဈဆှသေဈတှရေလာမှာတော့အမှနျပါပဲ။ တဈနေ့ တဈနေ့ အိမျထဲမှာ အခြိနျကုနျနသေူတှေ၊ အလုပျလုပျရငျလညျး အလုပျကလူတှနေဲ့ပဲ နစေ့ဉျဆကျဆံမိနသေူတှအေတှကျတော့ ကိုယျခံပညာသငျတနျးသှားလိုကျရငျ အပွောငျးအလဲတဈခုတော့ရမှာပါ။ အထူးသဖွငျ့ နရောစုံ၊ အလှာစုံ၊ လုပျငနျးစုံက လူတှေ၊ အထူးသဖွငျ့အမြိုးသမီးတှနေဲ့တှဆေုံ့နိုငျပွီး ကိုယျ့ရဲ့ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးနယျပယျပိုကယျြပွနျ့လာနိုငျပါတယျ။ွ
၂။ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုပိုရှိလာစပေါတယျ
အထူးသဖွငျ့ ယောငျးတို့အနနေဲ့ အပွငျထှကျသှားလာရာမှာ ပိုပွီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှိလာနိုငျပါတယျ။ ငါ့ကို ဘယျသူမြား အန်တရာယျပေးမလဲ၊ ဟိုနားကလူက ငါ့ကိုဒုက်ခပေးမှာလားလို့တှေးကွောကျနဖေို့မလိုတော့ပါဘူး။ဘယျအခြိနျမှာပဲ ဖွဈဖွဈ ကိုယျခံပညာတတျထားသူက ကိုယျ့ကိုအန်တရာယျပွုသူကို အခြိနျမရှေးလကျတုံ့ပွနျဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ငါကိုယျခံပညာ တတျထားတာပဲဆိုပွီး သှားခငျြတိုငျးသှား၊ လာခငျြတိုငျး လာတာမြိုးလို ယုံကွညျမှုမလှနျကဲသငျ့ဘူးပေါ့နျော။
၃။ အာရုံစူးစိုကျမှုကောငျးလာဖို့ အထောကျအကူပွုပါတယျ
ကိုယျခံပညာရဲ့ အဓိကသော့ခကျြက စူးစိုကျမှုအားကောငျးဖို့ပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ ပဈမှတျကိုသခြောအာရုံမစိုကျရငျ ကာငျးကောငျးတိုကျခိုကျလို့မရပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ကိုယျခံပညာသငျတနျးတှကေ အာရုံစူးစိုကျမှုအားကောငျးဖို့လကေ့ငျြ့ပေးလရှေိ့ပါတယျ။ဒီကရလာတဲ့ ပညာတှကေို ကိုယျ့အလုပျ၊ ကိုယျ့ဘဝမှာပွနျအသုံးခတြတျရငျ အကြိုးရှိမှာပါ။
Related Article >>> ကိုယျ့အန်တရာယျကိုယျ ကာကှယျနိုငျဖို့ ငရုတျဖွနျးဆေးကို ဒီလို လုပျမယျ!
၄။ မိမိကိုယျကို စညျးကမျးခမြှတျတတျလာနိုငျပါတယျ
တကယျတော့ ကိုယျခံပညာသငျယူလလေ့ာတာဟာ ပငျပနျးသလို၊ ဇှဲရှိဖို့လဲလိုအပျပါတယျ။ သငျတနျးကို သှားလိုကျ၊ မသှားလိုကျလုပျတာမြိုးတို့ ပငျပနျးတယျဆိုပွီး နောကျရကျမသှားတာမြိုးမလုပျဘဲ အဆုံးထိမှနျမှနျကနျကနျသငျယူလလေ့ာဖို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ထိနျးခြုပျတတျတဲ့ အလအေ့ကငျြ့ရသှားရငျ ကိုယျ့အလုပျ၊ကိုယျ့ဘဝမှာလဲ ဇှဲရှိဖို့၊ ဘာမဆိုဆုံးခနျးတိုငျအောငျလုပျတတျဖို့ထိနျးခြုပျတတျတဲ့အလအေ့ကငျြ့ကောငျးလေးရသှားနိုငျပါတယျ။
ကိုယျခံပညာဆိုတော့ ယောငျးတို့သိတဲ့အတိုငျး ကိုယျလကျလှုပျရှားကစားရတာဖွဈလို့ကိုယျခန်ဓာကွံ့ခိုငျမှုပိုရှိလာစပေါတယျ။ ဝတဲ့သူတှဆေိုရငျလညျး ကိုယျလကျလှုပျရှားပိုလုပျရတာမို့ အဆီကပြွီး ကဈြလဈြတဲ့ခန်ဓာကိုယျရှိလာမှာပါ။ ပိနျသူတှလေညျး ကွှကျသားတှပေိုကွံ့ခိုငျလာစပေါတယျ။ အညောငျးထိုငျမြားလို့ ကိုယျခန်ဓာတောငျ့တငျးနသေူတှလေညျး အကွောပွပွေီး နရေထိုငျရတာ ပိုကောငျးလာစပေါတယျ။ ခြှေးထှကျမြားလို့ခန်ဓာကိုယျပေါ့ပါးသှားသလိုခံစားရမှာပါ။
၆။ အသားအရေ ကွညျလငျလာစပေါတယျ
ခြှေးထှကျမြားတဲ့အခါ အရပွေားအတှငျးမှာရှိတဲ့အညဈအကွေးတှဟော ခြှေးနဲ့အတူပါသှားပါတယျ။ အကြိုးဆကျအနနေဲ့သနျ့ရှငျးကွညျလငျတဲ့ အသားအရကေိုရှိရှိမှာပါ။ ဝကျခွံအဖွဈမြားသူတှလေညျးဝကျခွံတှလြေော့ပါးသှားတာကို သိသိသာသာတှရှေိ့ရမှာပါ။
ကဲ … အခုတော့ ကိုယျခံပညာသငျယူရငျးနဲ့ အပိုဆုအနနေဲ့ရရှိနိုငျတဲ့ တခွားအကြိုးကြေးဇူးတှကေို
ယောငျးတို့သိကွပွီနျော။ မိနျးကလေးသဘာဝ ဘာမဆို အဆဈလေး၊အပိုလေးရရငျပြျောတတျကွသူတှမေို့ အခုလို ကိုယျ့ကိုယျကိုကာကှယျဖို့ လလေ့ာရငျးတခွားအကြိုးကြေးဇူးတှပေါရလာမှာမြိုးတော့ သိပျကွိုကျပဲ ဖွဈမယျထငျတယျနျော။
Tagged Fitness, Health, Women News
ခရီးထွက်တဲ့ အခါကားမူးတတ်လွန်းလို့ အမြဲ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ရပါတယ်။ ခရီးရှည်မကပဲ တစ်ခါတစ်ရံ ဟိုနားဒီနား တက္ကစီ ငှားတဲ့ အခါမျိုးမှာတောင် လည်ချောင်းထဲက စို့နင်နင် ဖြစ်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ ကားမူးတာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်တော့ နားအတွင်ပိုင်းနဲ့ ဦးနှောက်မှ အချက်ပြတာမညီမျှလို့ပါပဲ။ နားအတွင်းပိုင်းက ကားရဲ့ရွေ့လျားမှုကြောင့် လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားရပြီး အကယ်၍ ဦးနှောက်က လှုပ်ရှားမှုကို လစ်လျူရှုထားမိရင် ကားစမူးတတ်ပါပြီ။ အကြောင်းအရင်းကတော့ မျက်လုံးက ကားအတွင်းပိုင်းကို အာရုံများတဲ့အခါ လှုပ်ရှားမှုကို မျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့အတွက် ဦးနှောက်ကို ရပ်တန့်နေတယ် ဆိုပြီး အချက်ပေးလိုက်တာကြောင့် နားအတွင်းပိုင်းနဲ့ ဦးနှောက် စည်းချက်မညီတော့တာပါ။ ဒါဆို ကားမမူးအောင် ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ဘာတွေရှောင်ရှားသင့်လဲ။ဆက်ကြည့်ကြစို့။ ၁။ မျက်လုံးကိုအာရုံစိုက်ပါ ပထမကလို အခြေအနေမျိုးမှာ ဦးနှောက်နဲ့ နားအတွင်းပိုင် စည်းချက်ညီရအောင် ကားခေါင်းခန်း မှာထိုင်ပါ။ ကားအပြင်ပိုင်းက အဆောက်အဦး […]
Posted on August 28, 2018 December 10, 2018 Author မယ်တင် (ဆေး-၁)
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ရရင်ဖြင့် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံတွေ့နိုင်ရတတ်ပါတယ်လို့…
အသစ်အဆန်းလေးမှ နှစ်သက်ကြသူများသို့ (အိမ်ထောင်ရှင်သီးသန့် :P )
Posted on July 12, 2017 July 13, 2017 Author
အမှုန်မှုန်အလက်လက်လေးတွေကို သိပ်ကြိုက်တတ်တဲ့ယောင်းတို့ရေ.. ဒါမျိုးအမှုန်လေးတွေရော ကြိုက်တတ်ကြသေးလား.. 😛